လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များနှင့်ထိတွေ့မှုအားအကဲဖြတ်ခြင်း၊ အီသီယိုးပီးယားတောင်ပိုင်း၊ ဟာဝါဆာစီးတီးရှိကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ကျောင်းလူငယ်များအကြားထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်မှု - ကဏ္institutionအလိုက်အဖွဲ့အစည်းအခြေပြုစစ်တမ်း (၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်ပေါက်
Reprod ကနျြးမာရေး။ 2015 စက်တင်ဘာ 14;12:86. doi: 10.1186/s12978-015-0068-x.
Habesha T က1, Aderaw Z ကို2, Lakew S က3.
အဆိုပါ 2007 အဲသယောပိသန်းခေါင်စာရင်းအဆိုအရ 15-24 နှစ်ပေါင်းအသက်လူငယ်များသည်မြေတပြင်လုံးတွင်လူဦးရေ၏% 15.2 ကိုအထောက်အကူပြုရန်ဖြစ်သော 20.6 သန်းထက်ပိုမိုခဲ့ကြသည်။ လူဦးရေရဲ့ဒါတွေကအလွန်ကြီးမားပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအုပ်စုများအမျိုးမျိုးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များနှင့်ထိတွေ့လျက်ရှိသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများ (SEM) နှင့် Hawassa မြို့, တောင်ပိုင်းအီသီယိုးပီးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်များမှထိတွေ့မှုအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Hawassa မြို့ရှိကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ကျောင်းများမှကျပန်းရွေးချယ်ထားသောလူငယ်ကျောင်းသား ၇၇၀ ပါ ၀ င်သည့်ပုဒ်မပါ ၀ င်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုအခြေခံသည့်လေ့လာမှု။ အဆင့်မြင့်နမူနာနည်းစနစ်ကိုလေ့လာသည့်ဘာသာရပ်များကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အချက်အလက်များကိုကြိုတင်စစ်ဆေးပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမေးခွန်းလွှာကို အသုံးပြု၍ ကောက်ယူသည်။ EPI INFO ဗားရှင်း ၃.၅.၁ မှအချက်အလက်များကို SPSS ဗားရှင်း ၂၀.၀ စာရင်းအင်းဆော့ဝဲလ်အထုပ်များဖြင့်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်ကိုဖော်ပြရန်၊ bivariate နှင့် multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို အသုံးပြု၍ ပြသထားခြင်းဖြစ်သည်။ စာရင်းအင်းအသင်းအဖွဲ့ကို (p <770) တွင်လွတ်လပ်သောခန့်မှန်းသူများအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အကြောင်း 750 ကျောင်းသားများကို 97.4% ၏တုန့်ပြန်မှုနှုန်းနှင့်အတူဤလေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့ခဲ့ကြသည်။ ဒီအနက်ကျောင်းသားအကြောင်းကို 77.3% SEM ၏ရှေ့မှောက်တွင်အကြောင်းကိုသိတယ်နှင့်ဖြေဆိုသူအများစု 566 (75.5%) SEM ရုပ်ရှင် / ရုပ်ရှင်နှင့် 554 (73.9%) အရှေ့တောင်စာသားများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းကလူငယ်အချို့အတွက် SEM ဖို့ခြုံငုံထိတွေ့ 579 (77.2%) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူစုစုပေါင်း ၅၂၂ ဦး (၇၀.၄%) သည်မိသားစုအတွင်းလိင်ဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းမရှိဟုပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဖြေဆိုသူ ၄၅၀ (၆၀.၀%) သည် ၄ ​​င်းတို့၏ကျောင်းတွင်လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးပညာပေးခြင်းမရှိကြောင်းတိုင်ကြားကြသည်။ ကျောင်းသူ / သားများသည်မိန်းကလေးများထက် SEM နှင့်ထိတွေ့မှုမှာနှစ်ဆနီးပါးပိုမိုများပြားသည် (၉၅% CI: AOR 522 (CI = 70.4, 450) ။ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများသို့တက်ရောက်ခဲ့သည့်ကျောင်းသားများသည်အစိုးရကျောင်းများထက် SEM နှင့်နှစ်ဆပိုများကြောင်းတွေ့ရှိရသည် (၉၅%) CI: AOR 60.0 (CI = 95, 1.84) ။ အရက်ကိုသောက်ပြီး 'တစ်ခါတစ်ရံ' အဖြစ်တံဆိပ်ကပ်ခံရသည့်ကျောင်းသားများသည်အရက်မသောက်သောသူများထက် SEM နှင့် ၂ ဆပိုမိုထိတွေ့နိုင်သည် (1.22% CI = AOR 2.78 (CI = 95, 2.07) “ တစ်ခါတစ်ရံ”၊ “ တစ်ခါတစ်ရံ” နှင့်“ မကြာခဏ” ဟူ၍ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းခံရသောခတ်ဝါးသူများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောထိတွေ့မှုကိုပြသခဲ့သည် (1.29% CI: AOR 3.30 (CI = 95, 2.33), (1.26% CI: AOR 4.30 (CI = 95, 3.02) နှင့် အသီးသီး khat မစားသူများထက် (1.65% CI: AOR 5.52 (CI = 95, 3.40) ။ SEM လက်လှမ်းမီမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီနိုင်သည့်ကျောင်းရှိလူငယ်များသည်လက်လှမ်းမမီသောလူငယ်များထက်ခြောက်ဆ ခွဲခြား၍ တွေ့ရှိရသည် (CI ၉၅%) : AOR 1.93 (CI = 6.00, 95) ။
ကျောင်းသားများအမြင့်အရေအတွက်ကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများ sexually ထိတွေ့ခဲ့သည်။ လိင်, ကျောင်းအမျိုးအစား, ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့် SEM မှဝင်ရောက်ခွင့် SEM မှထိတွေ့မှု၏လွတ်လပ်သောခန့်မှန်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
လက်ရှိလူငယ်မျိုးဆက်သည်သမိုင်းတွင်ကျန်းမာရေး၊ ပညာအရှိဆုံးနှင့်မြို့ပြအများဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်စိုးရိမ်စရာအချို့ရှိနေသေးသည်။ လူအများစုကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာလိင်ဆက်ဆံကြတယ်။ လက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်တွေ့ရသည်။ နှုန်းသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးဆာဟာရသဲကန္တာရတောင်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပြီး ၁၅ နှစ်မှ ၁၉ နှစ်ကြားမိန်းကလေးများထက်ဝက်ကျော်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိကြသည်။ သန်းပေါင်းများစွာသောမြီးကောင်ပေါက်များသည်ဆာဟာရသဲကန္တာရတောင်ပိုင်းအာဖရိကတွင်ကလေးများမွေးဖွားနေကြသည်။ အမျိုးသမီးထက်ဝက်ကျော်သည်အသက် ၂၀ မတိုင်မီမွေးဖွားသည်။ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများအပါအဝင်ဆယ်ကျော်သက်များရည်ရွယ်သည့်ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုရေး ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးတက်လာရန်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင်ပိုမိုအသိအမှတ်ပြုလာကြသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကမ္ဘာ့ဆယ်ကျော်သက်များ၏ ၈၅% သည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်နေထိုင်ကြသည်။ နှစ်စဉ်သန်း ၁၀၀ အထိကုသနိုင်သောလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါ (STI) ကူးစက်ခံရသည်။ ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလူသားတို့၏ခုခံအားကျဆင်းမှုဗိုင်းရပ်စ်ပိုး (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ) ကူးစက်မှုအားလုံး၏ ၄၀% ခန့်ရှိသည်။ တစ်နေ့လျှင် ၇၀၀၀ ခန့်ကူးစက်ခံရသည်။ ကျားမမညီမျှမှု၊ လိင်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူထုမီဒီယာများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်လူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှုစသည့်မျှော်လင့်ချက်များကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များသည်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေသည့်အချက်များစွာ၏လွှမ်းမိုးမှုခံရသည်။ ထို့အပြင်မြီးကောင်ပေါက်များစွာသည်မိဘများ၊ အခြားအရွယ်ရောက်သူများနှင့်ခိုင်မြဲသည့်တည်ငြိမ်သောဆက်ဆံရေးမရှိခြင်းဖြင့်၎င်းတို့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများအကြောင်းပြောဆိုနိုင်သည်။ ဤအခက်အခဲများကြားမှသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်အစီအစဉ်များသည်တကယ့်ကိုထူးခြားစေနိုင်သည်။ အောင်မြင်သောအစီအစဉ်များသည်လူငယ်များအားဘဝအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းစွမ်းရည်တိုးတက်အောင်ကူညီခြင်း၊ လူငယ်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်စိုးရိမ်မှုများကိုလေးစားခြင်း၊ ရပ်ရွာလူထုများအားထုတ်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့်အီသီယိုးပီးယားအစိုးရသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ကျန်းမာရေးကိုအဓိကထားသော MDG (အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ / အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ STI နှင့်အခြားကူးစက်တတ်သောရောဂါများကူးစက်ပြန့်ပွားမှု) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ထို့ကြောင့်ဤတွေ့ရှိချက်သည်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့မှုအဆင့်အတန်းနှင့်အတန်းဖော်အိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများနှင့်အတူကျောင်း၌လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တိုးတက်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ရရှိသည့်ရည်မှန်းချက်ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအကဲဖြတ်ရန်အစိုးရကိုအကျိုးရှိစေသည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရေးသူတွေအနေနဲ့ဒီတွေ့ရှိချက်ကို BMC မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဂျာနယ်မှာထုတ်ဝေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါမှသာသူတို့ပိုမိုကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်၏ထုတ်ကုန်အတွက်သူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာများကိုပြန်လည်စီစဉ်ရန်အသုံးပြုသောအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များအားလုံးအနေဖြင့်လွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သုတေသီများ၊ လေ့ကျင့်သူများ၊ မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ ကျောင်းသားများ၊ ကျောင်းခေါင်းဆောင်များနှင့်ပညာရှင်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏အနာဂတ်သုတေသနကိုးကားချက်များ၊
ကမ်ဘာပျေါတှငျတစ်ဦးထက်ပိုဘီလီယံခန့်ကလူ 15 နှင့် 24 ၏အသက်အရွယ်အကြားရှိပါတယ်။ ထိုအထဲကအများစုဟာ [ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှာနေထိုင်1] ။ အီသီယိုးပီးယားတွင်အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်ကြားလူငယ်များသည် ၁၅.၂ သန်းကျော်ရှိပြီးလူ ဦး ရေ၏ ၂၀.၆% ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။2] ။ လူဦးရေရဲ့ဤအကြီးများနှင့်တန်ဖိုးရှိရှိအုပ်စုများအမျိုးမျိုးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များနှင့်ထိတွေ့လျက်ရှိသည်။ အများအပြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များများထဲတွင်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်စောစောအိမ်ထောင်ရေး, မယားအမြားယူ, အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါဖြတ်တောက်ခြင်း, unplanned ကိုယ်ဝန်, နီးကပ်စွာလှပတဲ့ကိုယ်ဝန်, ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း, လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု (အက်စ်တီအိုင်) [အဓိကသူများဖြစ်ကြ၏1].
အမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများ (အွန်လိုင်းရှာအစီရင်ခံရန်ဖွယ်ရှိ (ထိုကဲ့သို့သော7ကြိမ်အဖြစ်ယောက်ျားအမျိုးသမီးထက် SEMs မှမိမိတို့ကိုယ်ကိုဖျောထုတျဖို့ပိုဖွယ်ရှိဖြစ်တွေ့ပါပြီကွောငျးဖျောပွခဲ့p <0.001) နှင့်အော့ဖ်လိုင်းသာရှာကြံအစီရင်ခံရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်4ကြိမ် (p <0.001)) [3-5] ။ မိန်းကလေးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်စိတ်ပူပန်ခြင်းခံရဖို့ယောက်ျားလေးများထက်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ သုံးဆယ်ငါးမိန်းကလေးများရာခိုင်နှုန်းကိုသာခြောက်လယောက်ျားလေးများရာခိုင်နှုန်း [သူတို့အတွေ့အကြုံအားဖြင့်အလွန်စိတ်ဆိုးခဲ့ကြကြောင်းအစီရင်ခံ6, 7].
ယူအက်စ်မှလေ့လာမှုတစ်ခုအရ ၁၄ နှစ်နှင့်အထက်လူငယ်များသည်လူငယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အွန်လိုင်းရှာဖွေမှုအပြုအမူကိုသုံးဆမျှဖော်ပြလေ့ရှိသည် (စ 0.001) ။ အော့ဖ်လိုင်းကိုသာရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းမရှိသောအပြုအမူများကိုတင်ပြသောလူငယ်များအကြားအသက်အရွယ်၌သိသိသာသာကွဲပြားမှုမရှိပါ။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုလက္ခဏာအားလုံးသည်အမူအကျင့်ကိုရှာဖွေသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအစီရင်ခံစာများကိုသိသိသာသာခွဲခြားရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။4].
နေအိမ်အပြင်ဘက်တွင်အမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများအဟောင်းများကိုမြီးကောင်ပေါက်အွန်လိုင်းကိုပိုပြီးမကြာခဏအငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ contents တွေကိုကြည့်ရှုရန်လေ့ကြောင်းလေ့လာသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောစျယာနျဘာသာတရားကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နှောင့်နှေးဆက်စပ်နေပါတယ်။ အနိမ့်ယာနျဘာသာတရားကိုအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများပိုမိုထိတွေ့ဆက်စပ်နေသည် [3, 4, 8].
New Hampshire ၏လေ့လာမှုများကမိဘ၏အင်တာနက်ထိန်းချုပ်မှုများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၄ င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက် ၄ ခုအနက်မှလူငယ်များသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအပြုအမူကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်လူငယ်များကိုသိသိသာသာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိပါ အလားတူပင်စောင့်ရှောက်သူများ၏မြင့်မားသောရာခိုင်နှုန်း (၈၅-၉၃%) ကလူငယ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုတားမြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အိမ်ထောင်စုတစ်ခု၏စည်းမျဉ်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်စီစစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်များတပ်ဆင်ထားသလားမေးသည့်အခါစောင့်ရှောက်သူများ ၂၇% နှင့်လူငယ်အွန်လိုင်းရှာဖွေသူများ၏ ၁၆%၊ စောင့်ရှောက်သူများ၏ ၂၂% နှင့်လူငယ်အော့ဖ်လိုင်းရှာဖွေသူ ၁၉% နှင့်စောင့်ရှောက်သူများနှင့်လူငယ်ရှာဖွေသူ ၂၃% တို့အကြား အပြုသဘောတုံ့ပြန် .
ယူအက်စ်အေတွေ့ရှိချက်များမြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်လူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူမိဘကလေးဆက်ဆံရေးအရည်အသွေး, မိဘကလေးဆက်သွယ်ရေးနှင့်သက်တူရွယ်တူထောက်ခံမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းအပြန်အလှန်လူမှုရေးစနစ်များကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းသရုပ်ပြကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှာအဟောင်းတွေ, မိဘများနှင့်အတူချိတ်ဆက်၏အဆင့်မြင့်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏အောက်ပိုင်းနှုန်းထားများ, နည်းပါးလာမိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ကြသတင်းပို့ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များလုပ်သူကိုလူငယ်တွေက  ။ အရှေ့ပိုင်းမစ်ရှီဂန်နှင့်အခြားလေ့လာမှုတွေ့ရှိချက်မှာတော့နဂိုအတိုင်းမိသားစုများနေထိုင်လူငယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အခြားမိသားစုပုံစံများနေထိုင်ရွယ်တူချင်းထက်လျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကသတင်းပို့ဖို့ပိုများပါတယ်။ မိဘများ '' ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ [မိဘ-ဆယ်ကျော်သက်ဆက်သွယ်ရေးမှသိသိသာသာဆက်စပ်မဟုတ်ကြပေမယ့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များဤစကားဝိုင်းများဖို့တိကျတဲ့စပ်လျဉ်းဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်10, 11] ။ အိမ်မှာလေ့လာမှုများတွင်နေ့စဉ်ခတ်စားသုံးမှုလည်းအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အရက်စားသုံးမှုနှင့်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုများအကြားသိသိသာသာများနှင့် linear အသင်းအဖွဲ့အရက်ကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့အားနေ့စဉ်ကြောင့်အသုံးမပြုသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်သုံးခြံတိုးမြှင့်လေးသာမှုရှိခြင်းနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ ခတ်ထက်အခြားတ္ထုများအသုံးပြုခြင်း [အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုစတင်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်12].
အဆိုပါစောင့်ရှောက်သူများကလေးကြားဆက်ဆံရေးညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုအစီရင်ခံများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းအတွက်အရေးပါသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့စောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူဆင်းရဲသားစိတ်ခံစားမှုနှောင်ကြိုးသတင်းပေးပို့သူကိုလူငယ်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့စိတ်ခံစားမှုနှောင်ကြိုး (သတင်းပေးပို့သူတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူအုပ်စုသည်လူငယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အွန်လိုင်း-ရှာအပြုအမူအစီရင်ခံရန်လည်းနှစ်ကြိမ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်p <0.01) ။ မကြာခဏ coercive ဆုံးမခြင်းသည် 67% ပိုမိုမြင့်မားသောညှိနှိုင်းထားသောခြွင်းချက်အလေးသာမှုများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။p <0.05) ။ ဆိုးသွမ်းအပြုအမူ (တစ်ခုခုအွန်လိုင်း-ရှာအပြုအမူသတင်းပို့၏ပြုပြင်ခြွင်းချက်လေးသာမှုတစ် 4-ခြံတိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်p <0.001) သို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းသာရှာကြံအပြုအမူ (p <0ရှိသမျှသည်အခြားသောသြဇာဝိသေသလက္ခဏာများ, New Hampshire အမျိုးသားစစ်တမ်း၏တွေ့ရှိချက်များအဘို့အညှိအပြီး Non-ရှာအပြုအမူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ .001)  ။ ဆိုးသွမ်းလူငယ် [ညစ်ညမ်းထိတွေ့ဒါပေမယ့်လည်းပိုပြီးထိတွေ့မှုသတင်းပို့, (မကြာခဏ 10 အောက်မှာ) အနေနဲ့အစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှာထိတွေ့ခဲ့ဖို့ပိုများပါတယ်, မိမိတို့ရွယ်တူထက်ပိုမိုလွန်ကဲညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသာ13].
New Hampshire, အမေရိကန်, လေ့လာမှုလည်းပစ္စည်းအသုံးပြုမှုအွန်လိုင်းထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းအတွက်ပြုပြင်ခြွင်းချက်အလေးသာနေတဲ့ Two-ခြံတိုး (ထက်ပိုမိုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိp <0.001) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အော့ဖ်လိုင်းသာ (p <0.01) မှုမရှိခြင်းကိုပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့သူကိုအလားတူလူငယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပြုအမူရှာကြံ။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှမရည်ရွယ်တဲ့ထိတွေ့မှုအစီရင်ခံတင်ပြသူကိုလူငယ်တွေကမရည်ရွယ်တဲ့ထိတွေ့သတင်းပို့ခဲ့ပါဘူးသူကိုအလားတူလူငယ်များ (နှိုင်းယှဉ်အွန်လိုင်းရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိတွေ့မှုအစီရင်ခံရန် 2.5 ကြိမ်ထက်ပိုမိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်p <0.001) .
သူတို့ကျောင်းမှာသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မိဘများနှင့်အတူပြုကြထက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ပို. ပို. ကမ္ဘာတဝှမ်းလူငယ် [မီဒီယာနှင့်ပိုမိုအချိန်ဖြုန်း14, 15] ။ လူငယ်များကိုနားထောင်ကြသည်နှင့် / သို့မဟုတ်ကြည့်ရှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းအနည်းငယ်သာ [လိင်ကျန်းမာထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါအဘယျသို့တာ16] ။ အများစုအဟောင်းတွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမြီးကောင်ပေါက်ပိုပြီးပီပီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူလူတို့နှင့်အတူပိုပြီးမကြာခဏရင်ဆိုင်စေခြင်းငှါ, နှင့်အငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ [လျော့နည်းပီပီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုပိုမိုမကြာခဏလူတွေဖြည့်ဆည်းခြင်းငှါ17] ။ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုလည်း [အကျိုးဆက်ကြည့်ရှုအားပေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေပမာဏကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအရာ, တိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွက်အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးအတော်လေးကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြု18].
Hawassa City ရှိကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ကျောင်းသူ / သားများအတွက်အပိုင်းလိုက်လေ့လာမှုဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကိုအက်ဒစ်အဘာဘာနဲ့ ၂၇၅ ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့တောင်အာရှအီသီယိုးပီးယားပြည်နယ်၏မြို့တော်ဖြစ်သောဟာဝါဆာမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ကျောင်း (၁၀) ခုရှိသည်။ ကျောင်းသားပေါင်း ၆၂၄၅ ဦး မှ ၂၈၂၅ ဦး သည်အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။19] ။ အဆိုပါမြို့ Sidama, Wolaita, အမ်ဟာရာ, Guraghe နှင့် Oromo အဘိဓါန်တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများကလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်တရားဝင်ဘာသာစကား Amharic ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ရှစ် subcity အုပ်ချုပ်ရေးဇုန်နှင့် (ထိုကဲ့သို့သောကို Wi-Fi ကဲ့သို့) ဘရော့ဘန်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုမေလ 1 / 12 မှမေလ 2014 ထံမှကျင်းပခဲ့သည်။
လေ့လာမည့်လူ ဦး ရေအတွက်နမူနာအရွယ်အစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်အောက်ပါအဆင့်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ လူ ဦး ရေအချိုးအစားအတွက်ဖော်မြူလာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ 5% မဖြစ်စလောက်အမှား ()) နှင့် 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလ (α = 0.05) အတွက်ယူဆချက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ယခင်လေ့လာမှုမှရရှိသောစာသားထိတွေ့မှု၏ခန့်မှန်းခြေပျံ့နှံ့ခဲ့သည် p = 0.65 ။ ထို့ကြောင့်စုစုပေါင်းနမူနာအရွယ်အစားမှာ ၇၇၀ ဖြစ်သည်။ ဤဖြေဆိုသူများကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်အဆင့်များစွာနမူနာနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဟောဝါမြို့တွင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ကျောင်း (၁၀) ကျောင်းရှိသည်။ အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ၃ ကျောင်းကိုရိုးရှင်းသောကျပန်းနမူနာနည်းစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကျောင်း ၄ ကျောင်းအတွက်ဖြေဆိုသူများကိုအရွယ်အစားအချိုး (PPS) အချိုးအစားဖြင့်လူ ဦး ရေကို အသုံးပြု၍ ခွဲဝေချထားသည်။ ဤတွင်ကျောင်းသားများ၏စာရင်း (စာရင်း) ကိုနမူနာဘောင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤကျောင်းတစ်ခုစီတွင်ကျောင်းသားများကိုအဆင့် ၁၁ နှင့် ၁၂ အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤအတန်းများမှကျောင်းသားများကိုထီနည်းဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ရွေးချယ်ထားသောကျောင်းသားတစ် ဦး ချင်းစီမှသင်တန်းသားများကိုထီနည်းစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်သည် (ကျောင်းသားများတက်ရောက်သူစာရွက်ကို အသုံးပြု၍) ။ ပုံ 1 နမူနာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။
ဒေတာကိုတုံ့ပြန်အုပ်ချုပ်မေးခွန်းလွှာသုံးပြီးစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကမေးခွန်းလွှာသုံးပိုင်းသို့ခွဲခြားခဲ့သော 60 variable တွေကို, ပါဝင်သည်။ ဤသည်မှာလူမှု-လူဦးရေအချိုးအစား, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အခြားထိတွေ့ variable တွေကိုပါဝင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို variable ကိုသာပါဝင်သူခြင်းဖြင့်တုန့်ပြန်ခံရဖို့တုံ့ပြန်မှုစာရင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာအရည်အသွေးကိုအာမခံရန်,2ရက်ပေါင်းလေ့ကျင့်ရေးလေးဒေတာစုဆောင်းနှစ်ယောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးမှပေးထားခဲ့သည်။ လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဆီလျော်မှုအပေါ်သင့်လျော်သောအချက်အလက်များနှင့်ညွှန်ကြားချက်ဖြေဆိုသူအားပေးပြီးမှခဲ့သည်။ အဆိုပါဒေတာစုဆောင်းအားလုံးမေးခွန်းများကိုဖြည့်ချိန်အထိဖြေဆိုသူနှင့်အတူတည်းခိုနှင့်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။ အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းဖြေဆိုသူမှလုံခြုံခဲ့ပါတယ်။
ဒေတာစုဆောင်းခြင်းပြီးနောက်, တစ်ဦးချင်းစီမေးခွန်းလွှာပြည့်စုံ, ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအတွက် check လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်နှင့် template ကိုအထဲသို့ ဝင်. နှင့်အမှားအယွင်းများများအတွက် Re-check လုပ်ထား။ ဒေတာများ entry ကို EPI အင်ဖိုဗားရှင်း 3.5.1 စာရင်းအင်း software ကိုသုံးပြီးပြုသောအမှုများနှင့်ထပ်မံအပြောင်းအလဲနဲ့ဆန်းစစ်လေ့လာရန်နှင့် SPSS ပြတင်းပေါက်ဗားရှင်း 16 တင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ သဘောထားကမေးခွန်းများကိုချုပ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်နှင့်ယုတ်ရမှတ်ဖြေဆိုသူရဲ့အလုံးစုံသဘောထားကခွဲခြားရန်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ဒွိ Logistic ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်သုံးပြီး Bivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလွတ်လပ်သောခန့်မှန်းအကြားအသင်းအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
၀.၀၅ ထက်နည်းသော p တန်ဖိုးတွင် binary တွင်ဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ရှိရသော variable များကို binary logistic analysis အား အသုံးပြု၍ multivariate logistic model အတွက်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သိသာသောဆက်စပ်မှုရှိသည့် variable များကို OR ကို အခြေခံ၍ 0.05% CI နှင့် 95 ထက်နည်းသောတန်ဖိုးတို့ဖြင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါလေ့လာမှု Debre ဒုတိယပိုင်းတက္ကသိုလ်များ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကော်မတီက၏ခွင့်ပြုချက်အပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်နှင့် Hawassa မြို့အုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးဗျူရို၏ခွင့်ပြုချက်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ အားလုံးဖြေဆိုသူပါဝင်မှုစေတနာ့ဝန်ထမ်းအခြေစိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆောင်ရွက်ချက်များလေ့လာမှုမှာပါဝင်တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးချင်းစီ၏လေးစားမှု, ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံဖို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ်ပြန်ကြားရေးကရှင်းပြသည်ခဲ့သည်။ အချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များဒေတာစုဆောင်းခြင်းသို့ထိတွေ့ဆက်ဆံမတိုင်မီစိတ်ချပါအားလုံးလေ့လာမှုဘာသာရပ်များနှင့်အသိပေးသဘောတူညီခကျြမှနှုတ်ဖြင့်အာမခံပေးခဲ့သည်။
ဤလေ့လာမှုသည်တုန့်ပြန်မှုနှုန်း ၉၇.၄% ရှိခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူ ၇၅၀ အနက် ၃၈၆ ဦး (၅၁.၅%) သည်အမျိုးသားများဖြစ်ပြီးအစိုးရကျောင်းမှ ၄၈၉ (၆၅.၂%) သည်။ ဖြေဆိုသူ ၄၇၀ ဦး (၆၂.၇%) သည် ၁၁ တန်းကိုတက်ရောက်ကြပြီးကျန် ၁၂ တန်းတွင်ကျန်ကျောင်းသားများဖြစ်သည်။ ± 97.4 SD နှင့်အတူကျောင်းသားများ၏ပျမ်းမျှအသက် 750 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူများမှလက်မထပ်ထားသူ (တစ်ကိုယ်ရေ) ဖြေဆိုသူ ၇၁၃ ဦး (၉၅.၁%) နှင့် ၄၈၇ (၆၄.၉%) တို့သည်မိဘများနှင့်အတူနေထိုင်ကြသည် (ဇယားကွက်) 1).
Hawassa တောင်ပိုင်းအီသီယိုးပီးမေလ 2014 အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကျောင်းတက်လူငယ်လူမှု-လူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများ
ဖြေဆိုသူ ၅၉၁ ဦး (၇၈.၈%) သည်မည်သည့်အခါမျှအရက်မသောက်ခဲ့ကြ၊ ၇၃၀ (၉၇.၃%) သည်ဆေးလိပ်မသောက်ရ၊ khat။ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုစီတွင် 'အကြိမ်ကြိမ်' ဖော်ပြခဲ့သည့်ဖြေဆိုသူများအနက်အများစုသည် ၁၈၇ (၂၄.၉%) ကဝါးနှင့် ၁၀ (၁.၃%) စီးကရက်သောက်သူများဖြစ်သည်။ 2.
Hawassa မြို့, မေလ 20014 အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကျောင်းကလူငယ်အချို့အတွက်ဖြေဆိုသူများကပစ္စည်းအသုံးပြုမှု frequency ဖြန့်ဖြူး။ NB: အခြားသူများ, မိသားစုများကူညီပေးနေညဥ့်ကလပ်နှင့်ဘာသာရေးအခမ်းအနားများတက်ရောက်ခြင်းနှင့်အားကစားကစားပါဝင်သည်
ဖြေဆိုသူ ၃၅၆ ဦး (၄၇.၅%) သည်ရုပ်ရှင် / တီဗွီအစီအစဉ်များကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ၂၈၇ (၃၈.၃%) သည်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေခြင်းမှသုံးစွဲခြင်းနှင့် ၃၁ (၄.၁%) သည် (အားကစားနှင့်မိသားစုအားကူညီခြင်းကဲ့သို့သော) အခြားသူများကိုကြည့်ရှုနေသည်။ 3.
Hawassa မြို့, မေလ 2014 ၏ကြိုတင်ကျောင်းအားလပ်ချိန်အပန်းဖြေဖြတ်သန်းဖြေဆိုသူရာခိုင်နှုန်း။ NB: အခြားသူများကိုကျောင်းကဝင်းရုပ်ရှင်ပြပွဲ, မိတျဆှေရဲ့အိမျမြားပါဝငျနှင့် VCD ကိုကစားသမားညစ်ညမ်းဝယ်ယူ
ဖြေဆိုသူစုစုပေါင်း၏ ၅၇၉ ဦး (၇၇.၂%) သည်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းခံရသည်။ ဒီဗီဒီဖွင့်စက်ဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားပါသောလိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများသည်အဓိကအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာ (၆၄.၀%)၊ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု (၅၃.၂%) နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်း (၄၁.၆%) တို့ဖြစ်သည်။ ပါ ၀ င်ဖြေဆိုသူ ၇၅၀ မှ ၄၈၄ (၆၄.၅%) က SEM ကိုလက်လှမ်းမီမှုကို 'လွယ်ကူသည်' ဟုတံဆိပ်ကပ်ခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖတ်ရှုသည့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမေးခွန်းကိုဖြေဆိုသူသင်တန်းသား ၅၅၄ (၇၃.၉%) သည် ၄ ​​င်းတို့ကိုထိုကဲ့သို့သောစာသားများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုပြန်အမှတ်ရခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းများသည်စာဖတ်ခြင်း၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည် (၃၈၄) (၅၁.၂%) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာ ဦး စားပေးစာဖတ်ခြင်းအတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုသည် ၂၁.၇% ရှိခဲ့သည်။
မြင့်မားသောလိင်အကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သည့်စာဖတ်ခြင်းအကြောင်းအရာများ (များသောအားဖြင့်) တစ် ဦး တည်းကိုသာဖတ်ရှုလေ့ရှိပြီးဖြေဆိုသူ ၃၈၄ ဦး (၄၆.၄%) သည်လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူ ၁၀၃ ဦး (၁၃.၇%) နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်မိတ်ဆွေများနှင့် ၃၂ (၄.၃%) တို့ပါဝင်သည်။ စာဖတ်နှုန်းအကြိမ်ရေနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေဆိုသူ ၁၀၅ ဦး (၁၈.၉%) သည်စာဖတ်သူများအားတစ်ခါတစ်ရံ (တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်) ဖတ်ခဲကြပြီး ၄၄၂ (၇၉.၈%) သည်အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ခဲ့သည်။ (Table22).
Hawassa မြို့, မေလ 2014 ၏ကြိုတင်ကျောင်းကလူငယ်အချို့အကြားရှင်းလင်းပြတ်သားစွာစာဖတ်ခြင်းပစ္စည်းများ sexually မှဖြေဆိုသူ exposure
လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ရှင်များနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဖြေဆိုသူ ၇၅၀ မှ ၅၆၆ (၇၅.၅%) သည်ထိတွေ့မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ မကြာခဏဆိုသလိုတုံ့ပြန်သူများအနက် ၁၅ ယောက် (၂.၇%) သည်လိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုမကြာခဏကြည့်ရှုလေ့ရှိကြောင်း၊ ၅၀၃ (၈၈.၉%) တစ်ခါတစ်ရံနှင့် ၄၈ (၈.၅%) တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ပြသခဲ့သည်။ အင်တာနက်ရှာဖွေခြင်းသည်လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ရှင်များ (၄၅.၉%) ၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီးနောက်တွင်မိုဘိုင်းဖုန်း Bluetooth ကိုသူငယ်ချင်းများ (၃၆%) နှင့်မျှဝေခြင်းနှင့်သူငယ်ချင်းများ၏အကောင့်များ (၂၇.၂%) ဖြင့်ဝေမျှကြသည်။ အခြားမကြာခဏကိုးကားထားသောသတင်းရင်းမြစ်များက (၂၂.၄%) ဖြေဆိုသူများမှငှားရမ်းခြင်း၊ ကျောင်းများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်များကို ၀ ယ်ခြင်းများဖြစ်သည်။ အရှေ့တောင်အာရှရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများနှင့်ထိတွေ့မှုရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့သောဖြေဆိုသူ ၂၁၉ ဦး (၃၈.၇%) သည်ရုပ်ရှင်များတွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အရာများကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၁၄၂ (၂၅.၁%) ထိတွေ့ဖြေကြားသူများသည်ထိတွေ့ပြီးနောက်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီး ၃၀ (၅.၃%) သည်စအိုသို့မဟုတ်ပါးစပ်ကဲ့သို့အဆင့်မြင့်သောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ ဖြေကြားသူအများစုကရုပ်ရှင်အနည်းငယ်သည်လုံခြုံစိတ်ချရသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြသခဲ့သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည် 3).
Hawassa မြို့, မေလ 2014 ၏ကြိုတင်ကျောင်းကလူငယ်အချို့အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်မှဖြေဆိုသူ exposure
ဖြေဆိုသူ ၇၅၀ တွင် ၃၈၅ ဦး ခန့် (၅၁.၃%) သည် SEMs တည်ရှိမှုအပေါ်အကောင်းမြင်ပြီး ၃၆၅ ဦး (၄၈.၇%) သည်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများရှိနေခြင်းအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောသဘောထားရှိကြသည်။ ၃၄၈ ဦး ခန့်က (၄၆.၄%) သည် SEM သည်လိင်အပြုအမူကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ၂၉၀ (၃၈.၇%) ကမူသဘောမတူနိုင်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ 750 သည်ထိုပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ထိခိုက်မှုများကိုသူတို့၏ဆရာများမှဖြစ်စေ၊ မိသားစုမှဖြစ်စေသင်ယူလိုသည် (ဇယား 4).
Hawassa မြို့၏ကြိုတင်ကျောင်းများတွင် SEMs ဆီသို့ဖြေဆိုသူသဘောထားကိုမေလ 2014
လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသောလူငယ်များအတွက်အဓိကသတင်းအချက်အလက်များမှာသူတို့၏သူငယ်ချင်းများဖြစ်သည် (၆၃.၂%) ။ ဖြေဆိုသူ ၅၂၂ ဦး (၇၀.၄%) သည်မိသားစုအတွင်းလိင်ဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းမရှိဟုပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဖြေဆိုသူ ၄၅၀ (၆၀.၀%) ကဖြေကြားသည်မှာကျောင်း၌လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးကျန်းမာရေးကိုမရရှိခဲ့ပါ။4နှင့်စားပွဲတင် 5.
ရာခိုင်နှုန်း Hawassa မြို့၏ကြိုတင်ကျောင်းကလူငယ်အချို့အတွက် SEM မှထိတွေ့မှုအတှကျအရင်းမြစ်, မေလ 2014
Hawassa မြို့, မေလ 2014 ၏ကြိုတင်ကျောင်းကလူငယ်အချို့အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. ဖြေဆိုသူတုံ့ပြန်ချက်
အဆိုပါ multivariate Logistic ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအထီးကျောင်းသားတစ်ဦးအမျိုးသမီး (95% CI ဖြစ်ခြင်းထက် SEM နှစ်ကြိမ်ပိုမိုမြင့်မားထိတွေ့မှုပြသခဲ့သော်လည်းခံကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိ: ။ ကော, 2.16 (CI = 1.52, 3.07) ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများသို့တက်ရောက်တဲ့သူတစ်ဦးကကျောင်းသားနှစ်ခုနီးပါးကြိမ်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ အများပြည်သူကျောင်းများသို့တက်ရောက်သောကျောင်းသားများထက်ကော 95 (CI = 1.67, 1.14) (စားပွဲတင်: SEM (2.43% CI မှထိတွေ့မှု 6).
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကျောင်းများလူငယ်များအကြား SEM အားလုံးကိုထိတွေ့မှုများနှင့်အသင်းအဖွဲ့ Hawassa မြို့, မေလ 2014 ကျော်ဖေါ်ပြခြင်းအကြောင်းရင်းများ
မိခင်နှင့်အတူနေထိုင်နေသောသူတို့အားဖြစ်နှင့်သောကျောင်းသားများသာဇီဝမိဘများ (95% CI နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူနထေိုငျထက် SEM မှလေးကြိမ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောထိတွေ့မှုထင်ရှား: ကော 3.91 (CI = 1.38, 11.12) နှင့်အဖိုးအဖွားနှင့်အတူနေထိုင်နေသောသူတို့အားလည်း (95% CI နှစ်ခုကြိမ်ပိုမိုမြင့်မားထိတွေ့မှုထင်ရှား ။ ကော: SEM မှကော 2.08 (CI = 1.16, 3.74) မိခင်နှင့်ဖခင်၏ပညာရေးအဆင့်အတန်း Regressing, အဘယ်သူ၏ဘိုးဘေးတို့ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ရေးသာမပေးနိုငျသောသူတို့အားကျောင်းသားများကိုအဘယ်သူ၏ဘိုးဘေးတို့၏ကောလိပ်, တက္ကသိုလ်ပညာရေး (95% CI ရယူခဲ့သောတွေထက်ပိုထိတွေ့လာသုံးကြိမ်ခဲ့ကြသည် 2.69 (CI = 1.52, 4.47) သူ၏မိခင်ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ရေးနိုင်ဘူးကျောင်းသားများသည်အဘယ်သူ၏မိခင်ကောလိပ်, တက္ကသိုလ်ပညာရေး (95% CI တက်ရောက်ခဲ့ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားများထက်နှစ်ဦးကိုဆပိုမိုထိတွေ့မှုရှိကြ၏။ SEM (စားပွဲတင်မှ 1.96 ၏ကော (CI = 1.18, 3.25) 6).
တံဆိပ်ကပ်အရက်ကိုယူပြီးသူကျောင်းသားများတစ်ခါတစ်ရံ '' အရက်ကိုယူပြီးမဟုတ်များထက် SEM မှသုံးကြိမ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောထိတွေ့မှုရှိခဲ့ (95% CI: ။ ကော 3.18 (CI = 1.83, 5.49) (ထိုကဲ့သို့သော) မရှိသလောက်အဖြစ်သေးငယ်တဲ့အမှုဝါးခဲ့သူများသည်ကျောင်းသားများကိုပြသ သုံးကြိမ်ထိတွေ့မှုတိုးလာ (95% CI: တံဆိပ်ကပ်ကော 3.12 (1.85, 5.25), '' တစ်ခါတစ်ရံ '' ငါးကြိမ်ပိုမိုမြင့်မားထိတွေ့မှု (95% CI ခဲ့ကြသည်: ကော 4.58 (2.75, 7.64) နှင့်အမည်တပ်ထားသော '' မကြာခဏ '(သုံးကြိမ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောထိတွေ့မှုထင်ရှား 95% CI: ကော 3.45 (1.90, 5.52) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများနောက်ဆုံးအနေနဲ့ '' လွယ်ကူစွာ access ကို '' တံဆိပ်ကပ် SEMs ရတဲ့၏ဖြစ်နိုင်ခြေခုနစ်ခုခြံ (95% CI ၏အလေးသာနေဖြင့်ပြသနိုင်ရန်။ 6.63 ၏ကော (CI = 4.33, 10.14) ထိတွေ့ SEM (စားပွဲတင်မှ 6).
ဤလေ့လာမှုသည်အီသီယိုးပီးယားတောင်ပိုင်း၊ ဟာဝါဆာမြို့ရှိ SEMs နှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသောလူငယ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များနှင့်ထိတွေ့မှုပမာဏကိုအကဲဖြတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၇၇.၂% သောဖြေဆိုသူများသည် SEM များနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ရသည် ဒီလေ့လာမှုမှာ SEM ထိတွေ့မှုအတွေ့အကြုံဟာအက်ဒစ္စအဘာဘာမှာပြုလုပ်ခဲ့သည့်ယခင်လေ့လာမှုများထက်ပိုမိုကြီးမားခဲ့သည်။20] ။ အဆိုပါခြားနားချက်ဒေသများနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလှုပ်ရှားမှုများတွင်ခြားနားချက်အားဖြင့်ပြဿနာများ၏ပျံ့နှံ့မှုအတွက်ကွာခြားချက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤလေ့လာမှုတွင်အင်တာနက်ရှာဖွေခြင်းသည်လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများ / ရုပ်ရှင်များ (၄၅.၉၃%) အတွက်သတင်းအချက်အလက်၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်မိုဘိုင်းဖုန်း Bluetooth ကိုသူငယ်ချင်းများ (၃၆.၀၄%) ဖြင့်မျှဝေသည် သို့သော်အက်ဒစ်အဘာဘာလေ့လာမှုတွင်ဗီဒီယိုငှားရမ်းခြင်းသည်အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ စာသားနှင့်ထိတွေ့ပါကသူငယ်ချင်းများသည် SEM ၏အဓိကအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။20] ။ လောလောဆယ်ဒီပြောင်းလဲမှုကြောင့်တိုင်းပြည်နှင့်အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာမြို့, Hawassa အတွက်ခရီးဆောင် SEM / မီဒီယာနှင့်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးမြှင့်သုံးစွဲနိုင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤလေ့လာမှုကဆယ်ကျော်သက် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်၎င်းတို့၏မိဘများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ မိဘအများစုသည်မိမိတို့၏မြီးကောင်ပေါက်များ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုဘယ်သောအခါမျှမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ ယခင်လေ့လာမှုတစ်ခုအရဖြေဆိုသူ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်အိမ်၌လိင်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုမပြုလုပ်ခဲ့ကြပါ။20] ။ ဤသည်ခြားနားချက်နှစ်ခုလုံးလေ့လာမှုများအတွက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ status ကိုခြားနားချက်အတွက်ကွာခြားချက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤလေ့လာမှုကဖြေဆိုသူ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်ကျောင်း၌လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးပညာရေးမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်အက်ဒစ်အဘာဘာ၏လေ့လာမှု (၆၀% မှ ၄၃.၆%) တွင်လေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များထက်ပိုများသည်။18] ။ ဤသည်ခြားနားချက်ကျောင်းတွင်ကျောင်းသားရဲ့မိသားစုနှင့်ကျောင်းမျိုးပွားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပညာရေးအားဖြင့် Hawassa မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်အနိမ့်ဆွေးနွေးမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီလေ့လာမှုက SEMs နဲ့ထိတွေ့သူတွေကအန္တရာယ်များတဲ့လိင်အပြုအမူတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၃၈.၇% ခန့်သည် SEM တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပြီး ၂၅.၀၈% သည်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်လိင်ကစားခဲ့ကြပြီး ၅.၃% သည်စအိုသို့မဟုတ်ပါးစပ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အလားတူတွေ့ရှိချက်များအိမ်အပြင်ဘက်ကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် [9-11] ။ ဤသည် SEM ထိတွေ့လေ့လာမှုရဲ့တွေ့ရှိချက်များ၏ဒေသများရှိအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စပ်လျဉ်းရှိစေခြင်းငှါပြသနိုင်ပါတယ်။
လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာနှင့်အင်တာနက်အကြောင်းအရာများကိုမလိုလားအပ်သောတောင်းဆိုမှုများကိုဤလေ့လာမှုတွင်ဖြေဆိုသူ ၃၂.၈% ကတင်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယခင်အိမ်တွင်းလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်နီးစပ်သည် (၃၂.၈% နှင့် ၂၇%)  နှင့် New Hampshire ပြည်နယ် (ယူအက်စ်) အမျိုးသားမိုဘိုင်းအခြေခံစစ်တမ်း (32.8% VS 52.5%) ၏တွေ့ရှိချက်များမှနိမ့်ကျသည်။4] ။ အလားတူတွေ့ရှိချက်ကြောင့်တိုင်းပြည်အနှံ့အင်တာနက် access ကိုပိုမိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းအလားတူအဆင့်အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်လေ့လာမှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါက, သီယိုးပီးယားအတွက်အနိမ့်တွေ့ရှိချက်အနိမ့်ဝင်ရောက်ခွင့်, လွှမ်းခြုံနှင့် / သို့မဟုတ်အင်တာနက်အသုံးချမှုနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်အပြန်အလှန်များအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်
အဆိုပါ multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ binary Logistic ဆုတ်ယုတ်သုံးပြီးထွက်သယ်ဆောင်အမျိုးသမီးကျောင်းသားများကို (1.8% CI နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ခြင်းအထီးကျောင်းသားများကို SEMs နီးပါး 95 ကြိမ်ပိုမိုမြင့်မားထိတွေ့မှုရှိခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ။ AOR 1.84 (CI = 1.22, 2.79) ဒါဟာတခြားနေရာပြုမိလေ့လာမှုများနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ခဲ့သည် [3, 5, 7] ။ ဒါကတူအပေါငျးတို့သလေ့လာမှုဒေသများရှိ SEM / မီဒီယာမှအထီးကျောင်းသားပိုကောင်း access များအတွက်ယဉ်ကျေးမှုအလှူငွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများသို့တက်ရောက်သူများသည်ကျောင်းသားများကိုသိသိသာသာ SEM မှထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ကြ (AOR = 2.07; 95% CI: 1.29, 3.30) ။ ဤသည်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကြောင့်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများအတွက်ကျောင်းသားတွေကိုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ခေတ်သစ် SEM / မီဒီယာများဝင်ရောက်ဖို့ပိုကောင်းဝင်ငွေရှိခဲ့ပါတယ်ခံရပေလိမ့်မည်။ ဒါဟာ [အိမ်မြေယာ (Addis Ababa) မှာပြုသောအမှုသည်ယခင်လေ့လာမှုနှင့်အတူကိုက်ညီမှုခဲ့သည်19] သောသီယိုးပီးယား၏မြို့တော် Hawassa နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုပြီးအခမဲ့သို့မဟုတ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းအင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်နိုင်ဘူး။ ဤသည် (ထိုကဲ့သို့သောကြွယ်ဝသောမိသားစု, ကဲ့သို့) ပုဂ္ဂလိကနှင့် (ထိုကဲ့သို့သောသူတို့သည်ဆင်းရဲသားမိသားစု, ကဲ့သို့) အစိုးရကျောင်းကလူငယ်အချို့ညီမျှအခွင့်အလမ်းအင်တာနက် access ကိုမှန်ကန်စေသည်။
[ကြောင့်အိမ်မှာပြုသောအမှုသည်အခြားလေ့လာမှုအားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းခဲ့သည်:; ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအပေါ် multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအရက်ကိုသောက်သောသူသည်ကျောင်းသားများကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်အရက်မသောက်ရတော့မှသူကျောင်းသားများထက် SEM မှသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ပြသကြောင်းပြသ (2.33, 95 1.26% CI AOR = 4.30)12] ။ ဖြေဆိုသူအကြား khat ဝါးလည်း SEM ထိတွေ့များအတွက်လွတ်လပ်သောအချက်ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ခတ်ဝါးတဲ့သူကျောင်းသားများမြင့်မားခြင်းမှတံဆိပ်ကပ် chewers အပေါငျးတို့သအမျိုးအစားများအတွက် SEMs ထိတွေ့ခဲ့သည်: (AOR = 3.02, 95% CI နှင့်အတူ '' တစ်ခါတစ်ရံ '' မရှိသလောက် (တစ်ချိန်က / နှစ်ကြိမ်တစ်ပတ်ကို), (AOR 1.65,5.52, 3.40% CI 95), တံဆိပ်ကပ် '' 1.93,6.00):: 'မကြာခဏ' (AOR = 2.67, 95% CI နှင့်အတူဖို့ 1.46,4.86) ။ ဤသည်သိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့လည်းကြောင့်တိုးပွားလာအရက်နှင့်ခတ်ပတ်ပတ်လည်အိမ်တွေကိုဝါးများနှင့်အနီးအနားရှိစာသင်ကျောင်းဝင်းမှဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားအသင်းအဖွဲ့များ [2008 အတွက် Addis Ababa ပြုယခင်လေ့လာမှုနှင့်အညီမဟုတ်ကြ19] ။ ဒီလက်ရှိမျိုးဆက်လူငယ်များသည်နှိုင်းယှဉ်ပါကအနိမ့်ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပျံ့နှံ့အရက်နှင့်ယခင်လူငယ်များအကြား khat အသုံးပြုသူများကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့ကအလွယ်တကူရယူနိုင်သည်ကိုအများစုအားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်ကျောင်းသားများအကြား SEM ရတဲ့၏ဖြစ်နိုင်ခြေ။ ဤသည်တို့ကြောင့်တိုးလာလက်ပ်တော့များသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူ, ဆဲလ်ဖုန်းနှင့်အခြားမှဖြစ်လိမ့်မယ် access ကိုအဘယ်သူမျှမနှင့်အတူထက် AOR 95 (CI = 5.64, 3.56): ။ ဒါဟာ (8.94% CI နှင့်အတူ '' လွယ်ကူစွာတံဆိပ်ကပ်ကျောင်းသားများအတွက်အားဖြင့်ထိတွေ့ခြင်းခြောက်ခြံနီးပါးအလေးသာတယ်ခဲ့သည် ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာခေတ်မီ SEM မီဒီယာ။ SEM ဝင်ရောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေအသေးအဖွဲနှင့် / သို့မဟုတ်ကျောင်းသားများအကြား SEM ထိတွေ့ပြီးနောက်အန္တရာယ်များကိုဆွေးနွေးခြင်းဤလေ့လာမှုအားဖြင့်ပေးပို့သည့်လမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုကကျောင်းသားများကိုမြင့်မားနံပါတ်များကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများ sexually ထိတွေ့ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ School တွင်လူငယ်များသည်မကြာခဏမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များမှတဆင့်၎င်းတို့၏ချက်ချင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း SEM ထိတွေ့ခဲ့သည်။ လိင်, ကျောင်းအမျိုးအစား, SEM ဆီသို့ဦးတည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်လက်လှမ်းမီဒီလေ့လာမှုမှာ SEM ထိတွေ့များအတွက်လွတ်လပ်သောခန့်မှန်းအဖြစ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အစိုးရ, အထူးသဖြင့် MOH နှင့် MOE အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာနှင့်အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်မှတစ်ဆင့်လိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှလူငယ်များရဲ့ထိတွေ့မှုနှင့်အတူဆက်စပ်ပျက်ဆီး minimize လုပ်ဖို့စည်းမျဉ်းမဟာဗျူဟာများချမှတ်သင့်ပါတယ်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာကျောင်းတစ်ကျောင်းမြီးကောင်ပေါက်များ၏လူမှုနှင့်လူငယ်များရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာ, သဘောထားများနှင့်အပြုအမူပုံဖော်အတွက်အစွမ်းထက်အခန်းကဏ္ဍသငျ့သညျ။ SEM ထိတွေ့များအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုဆုတ်ယုတ်ခြင်းမှသကဲ့သို့အဆိုပါ Hawassa မြို့ကနျြးမာရေးနှင့်ပညာရေးဗျူရိုကျောင်းမှာကျန်းမာရေးအပေါ်ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ဝန်ထမ်းများ, ကျောင်းမှာ mini ကိုမီဒီယာကလပ်အသင်းများအတွက်အခြေခံနှင့်မွမ်းမံသင်တန်းကိုတက်ရောက်ရန်ကမ်းလှမ်းသင့်ပါတယ်။ ကနျြးမာရေးအဆောက်အဦပုံမှန်ပေါ်မှာရှိသမျှ client များအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်. ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးနှင့်အသိပညာဖန်တီးမှုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ Debre ဒုတိယပိုင်းတက္ကသိုလ်, အများပြည်သူကျန်းမာရေးကောလိပ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်း forward ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ Hawassa အကြိုကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, ထိုကြီးကြပ်ရေးမှူး, ဖြေဆိုသူနဲ့ဒေတာစုဆောင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
AOR Adjustments လေးသာမှုအချိုးအစား
TH: တီထွင်ဒီဇိုင်းသည်, စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါဝင်ခဲ့သည့် sequence ကို alignment ကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ရေးဆွဲရေးအတွက်ပါဝင်ခဲ့။ ZA: စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါဝင်ခဲ့လေ့လာမှု၏ဒီဇိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့, လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏မူကြမ်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့ခြင်း, sequence ကို alignment ကိုပါဝင်ခဲ့။ SL: အစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတီထွင်ဒီဇိုင်းတီထွင်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်မူကြမ်းဖွံ့ဖြိုးဆဲပါဝင်ခဲ့နှင့် sequence ကို alignment ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ TH, ZA, SL: ဤစာရေးသူကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အတည်ပြုခဲ့သည်။
1 ။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရာရှိ (MPH), Welayta ဇုန်ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာန, SNNPR ကျန်းမာရေးဗျူရို, ကျန်းမာရေးဌာန, အီသီယိုးပီး။
2 ။ ကထိက (MSc), သူနာပြုနှင့်သားဖွား, ကျန်းမာရေးသိပ္ပံအာဗ Minch ကောလိပ်, အာဗ Minch, တောင်အနောက်အီသီယိုးပီးဦးစီးဌာန။
3 ။ ကထိက (MPH, Ph.D ကိုယ်စားလှယ်လောင်း), ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန, Debre ဒုတိယပိုင်းတက္ကသိုလ်, မြောက်ပိုင်းအီသီယိုးပီး။
တိုနီ Habesha, Email: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
Zewdie Aderaw, Email: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
Serawit Lakew, Email: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
1 ။ Scholl အီး, Schueller J ကို, Gashaw M က, Wagaw တစ်ဦးက, သီယိုးပီးယားမှာရှိတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များ၏ Woldemichael အယ်လ်အကဲဖြတ်။ 2004 ။
2 ။ အီသီယိုးပီးလူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းကော်မရှင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ။ အကျဉ်းချုပ်နှင့် 2007 လူဦးရေနှင့်အိမ်ရာသန်းခေါင်စာရင်း၏စာရင်းအင်းအစီရင်ခံစာ။ 2008 ။
3 ။ ဂူစတာဗိုက S, Mesch G. အလူမှုခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်။ 2006; 32: 601-18 ။ [PubMed]
4 ။ Ybarra ML, Mitchell က KJ ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့: တစ်အမျိုးသားရေးစစ်တမ်း။ Cyberpsychol ပြုမူနေ။ 2005; 8 (5): 473-86 ။ Doi: 10.1089 / cpb.2005.8.473 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
5 ။ Buerkel-Rothfuss N ကို, Strouse J ကို, Pettey, G, Shatzer အမ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း 'နှင့်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်' 'လိင် oriented နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာမှထိတွေ့မှု။ 1992 ။
6 ။ Rideout V ကို, အန်ဒါဆင်တစ်ဦးကဘော်စတွန်တီခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်း: မျိုးဆက် rx.com: ဘယ်လိုလူငယ်များကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်များအတွက်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပါ။ Menlo Park, CA: ဟင်နရီဂျေ; 2001 ။
7 ။ ကင်မရွန် K ကို Salazar L ကို, Bernhardt J ကို, web ပေါ်မှာလိင်နှင့်အတူ DiClemente R. ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' အတွေ့အကြုံကို Burgess-Whitman N ကို, Wingood, G: အွန်လိုင်းအာရုံစိုက်အုပ်စုများကနေရလဒ်တွေကို။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်။ 2005; 8: 535-40 ။ Doi: 10.1016 / j.adolescence.2004.10.006 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
၈။ Hardy S၊ Raffaelli M. ဆယ်ကျော်သက်ဘာသာတရားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အပြန်အလှန်လွှမ်းမိုးမှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ Nebraska - Lincoln, USA ။ J ကိုဆယ်ကျော်သက် 8; 2003: 26-731 ။ http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub။ [PubMed]
9 ။ ခရစ္စတိုဖာကို C, Kathryn တစ်ဦးက, လုဒိ A, ဂေါလန်မြို့တည်းအက်စ်အထောက်အကူပြုဆက်ဆံရေးနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ: တစ်ခုဂေဟစနစ်-အရောင်းအဝယ်ချဉ်းကပ်။ J ကိုကလေးအထူးကု Psychol ။ 2006; 31 (3): 286-97 ။ [PubMed]
10 ။ Abrego T က, ဖရီးမနျး-Doan, C, ဂျက်ဖာဆန်က S, Janisse အိပ်ချ်ဘွဲ့လွန် Capstone စီမံကိန်း။ 2011 ။ လိင်ဆွေးနွေးချက်: လိင်အကြောင်းကိုမိဘကလေးဆက်သွယ်ရေးသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအချက်များ။
11 ။ အဆိုပါအမွေအနှစ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ။ မိသားစုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဝါရှင်တန်ဒီစီကြားဆက်ဆံရေး: မိသားစု facts.org ။ 2008 ။
12 ။ Kebede: D, Alem တစ်ဦးက, Mitike, G, Enquselassie က F, Berhane က F, Abebe Y ကို, et al ။ အီသီယိုးပီးထဲမှာ khat နှင့် In-ကျောင်းကိုအကြားအရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များလိင်အပြုအမူနှင့် Out-of ကျောင်းကိုလူငယ်။ BMC ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2005; 5: 109 ။ Doi: 10.1186 / 1471-2458-5-109 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
13 ။ Bryant ကို C, Bjørnebek K ကိုသြစတြေးလျအစိုးရ, Criminology ၏ဌာန (AGIC) ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အန္တရာယ်: ရာဇဝတ်မှုနှင့်တရားမျှတမှုအပေါ်သြစတြေးလျရဲ့အမျိုးသားရေးသုတေသနနှင့်အသိပညာစင်တာ။ 2009 ။
14 ။ ရို D ကို, ဆယ်ကျော်သက်အထီးကျန်းမာရေးအပေါ်ဖျော်ဖြေရေးမီဒီယာများ၏ချမ်းသာအမ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ မြီးကောင်ပေါက် Med ပြည်နယ်အနုပညာဗျာ 2003; 14 (3): 691-716 ။ [PubMed]
15 ။ Gruber, L, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အရောင်များ၏ဆယ်ကျော်သက်အပေါ် Thau အိပ်ချ်လိင်-ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ: မီဒီယာသီအိုရီ, ဇီဝကမ္မဖွံ့ဖြိုးရေး, နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု။ J ကို Negro Education ။ 2003; 72 (4): 438-56 ။ Doi: 10.2307 / 3211195 ။ [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
16 ။ Hearold S က, Comstock G. အလူမှုရေးအပြုအမူအပေါ်ရုပ်မြင်သံကြား၏ 1043 သက်ရောက်မှု၏တစ်ဦးကပေါင်းစပ်။ ပြည်သူ့ Community ပြုမူနေ။ 1986; 1: 65-133 ။
17 ။ Snyder, Anastasia R ကို, Diane K. McLaughlin ။ "မိဘများနှင့်ရွယ်တူချင်း? ဘယ်လိုအများကြီးသူတို့ကအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသြဇာလွှမ်းမိုးပါနဲ့" စက္ကူဟာကျေးလက်ဒေသလူမှုလူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးများ, Sacramento,, CA, သြဂုတ်လ 2004 မှာပေးအပ်သည်။
18 ။ ဘရောင်း JD, Halpern မှန် CT, L'Engle KL ။ အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူပါသက်တူရွယ်တူအဖြစ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာ။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး။ 2005; 36: 420-7 ။ Doi: 10.1016 / j.jadohealth.2004.06.003 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
19 ။ ပညာရေးသီယိုးပီးယား (FMOE) Hawassa မြို့ပညာရေးဗျူရို, စာရင်းဇယားအစီရင်ခံစာ၏ဦးစီးဌာန၏ဖက်ဒရယ်န်ကြီးဌာန။ 2012 ။
20 ။ Berhanu L ကို, Haidar ဂျေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများမှထိတွေ့မှု၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် Addis Ababa, (အတည်မပြုရသေးသောစာတမ်းအစီရင်ခံစာ) တွင်ကျောင်းကိုလူငယ်အတွက်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏အခြားခန့်မှန်း 2008 ။